नयाँ शक्ति सहभागीतामूलक लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्ने नेपालकै पहिलो दल हुनेछ ~ Khabardari.com
नयाँ शक्ति सहभागीतामूलक लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्ने नेपालकै पहिलो दल हुनेछ
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्इले नयाँ शक्तिको अन्तरिम केन्द्रीय परिषदका क्रममा दिएको मन्तव्य
नयाँ शक्ति निर्माण अभियानको तर्फबाट हामीले विगत तीन महिनामा देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अनेकौं छलफल, अन्तरक्रिया र भेटघाटहरु गर्यौं । ती भेटघाटहरुमा हामीलाई हजारौं मित्रहरुको अपार माया, उत्साह र समर्थन प्राप्त भयो । अनेकौं युवा मित्रहरुले हामीलाई नयाँ शक्ति कस्तो बनाउने ? यसको राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र संगठनात्मक प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ? हामी कसरी छोटो समयमै यो देशलाई सम्बृद्ध बनाउन सक्छौं ? जस्ता प्रश्नहरुमा मूल्यवान सुझावहरु दिनुभएको छ । तिनै सुझावहरुको आधारमा हामी अझ धेरै लोकतान्त्रिक, सम्बृद्धि–उन्मुख र सुशासित राजनीतिक दल बनाउन चाहन्छौं । हामी विगतका अनुभवहरुबाट सिक्दै नेपाली राजनीतिलाई जनउत्तरदायी, रचनात्मक, सुशासित र सद्भावपूर्ण बनाउन चाहन्छौं । यसकालागि नयाँशक्ति निर्माण अभियानलाई सुरुदेखिनै जनताको जुन गहिरो माया, सद्भाव र समर्थन प्राप्त भयो त्यसकालागि हामी आभारी छौं । हामी जनताको बिश्वासलाई कहिल्यै झुक्न दिनेछैनौं । यही विश्वासका साथ नयाँ शक्ति निर्माण अभियानको पहिलो प्रचारात्मक चरण उत्साहपूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी गराउछौं । दोस्रो चरण राजनीतिक दल निर्माणको चरण हुनेछ । यो चरणलाई संस्थागत, दीगो र व्यवस्थित गर्न हामीले आजैबाट नयाँ शक्ति नेपाल, को अन्तरिम केन्द्रीय परिषद् निर्माण गरेका छौं । केन्द्रीय परिषद्ले दलको पहिलो राष्टि̭य सम्मेलन आयोजक कमिटी निर्माण, दलको अन्तरिम राजनीतिक तथा सांगठनिक कामहरुको व्यवस्थापन, नयाँ शक्तिको पक्षमा जनपरिचालन र समकालीन राजनीतिक समस्या समाधानकालागि संवादको पहल गर्नेछ । यसैगरी नयाँ शक्ति, नेपालको केन्द्रीय कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंमा सञ्चालन गरिएको समेत सहर्ष जानकारी गराउछौं ।
देशमा तत्काल तीन वटा अन्तरद्वन्दहरुको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । पहिलो: अगाडि बढेको औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्र र पछाडि पारिएको आर्थिक आधारको अन्त्य गर्नुछ । यसलाई सामाजिक न्याय सहितको तीब्र आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको कार्ययोजनाले हल गर्नेछ । दोस्रो: देशको जातीय तथा क्षेत्रीय विविधता र विषमताबाट उत्पन्न अन्तद्र्वन्दलाई समाधान गर्नुछ । यसलाई मूलत: समानुपातिक समावेशी आधारमा प्रमुख जातीय समूह खस–आर्य, मंगोलमूलका आदिवासी जनजाति, मधेसी–थारु, मुस्लिम, दलित, अल्पसंंख्यक, महिला र युवाहरुलाई न्यायोचित संघीय संरचना र राज्यको अंगहरुमा पुर्याउनु छ । सामाजिक पहिचान सहित सहअस्तित्व, समन्याय र आत्मसम्मानको संस्कृति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । तेस्रो: दुईठूला छिमेकी भारत र चीन बीचमा रहेको भूराजनीतिक अवस्थिति र सम्वन्धले सिर्जना गरेका चुनौति र अवसरहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्नुछ । यसलाई विगतमा जस्तो दुई ढुंगा बीचको तरुलको मानसिकताले होइन दुई उदयीमान अर्थतन्त्रहरु बीचको गतिशील पुलको अवधारणा अन्तरगत कामगर्नुपर्छ । यसकालागि अझधेरै लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, प्रगतिशील राष्ट̭वाद, सुशासन, समावेशीता, समन्याय, समाजवाद र सम्बृद्धिनै हाम्रा राजनीतिक प्राथमिकताहरु हुनेछन् । यिनै प्राथमिकताहरुलाई सैद्धान्तिकरण गर्दै नयाँ धारको वैकल्पिक राजनीति निर्माण गर्नु नयाँ शक्तिको राजनीतिक कार्यदिशा हुनेछ ।
हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै देशलाई सम्बृद्धिको त्यो उचाईमा पुर्याउने हो जहाँ उभिएर हामी गर्व गर्न सकौं । हामी सामाजिक न्यायसहितको सम्बृद्धि चाहन्छौं । हामीलाई थाहा छ फोस्रा भाषण, परम्परागत राजनीतिक ढर्रा, सिद्धान्तको वोझ र संकीर्णताबाट जनता मुक्ति चाहन्छन् । सम्बृद्धि नेपाली जनताको मुख्य अपेक्षा हो । हामी यो कार्यभार सहर्ष स्वीकार गर्दछौं । यो कार्यभार पूरागर्न हामी राष्टि̭य सम्बृद्धिका प्रारम्भिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु बनाउने छौं । यसकालागि हामीले देश–विदेशमा क्रियाशील बिषय विज्ञहरुसँगको परामर्शलाई निरन्तरता दिनेछौं । यो काममा हामी सबैको, सदैव उत्कृष्ट विचारहरु सुन्न आतुर छौं ।